भिडियो: हिउँदमा के हेरेर बसेका थिए सरोकारवालाहरु, बर्खामा हतार हतार “बिकास” गर्न खोज्दैछन् ? – Gulmiews
भिडियो: हिउँदमा के हेरेर बसेका थिए सरोकारवालाहरु, बर्खामा हतार हतार “बिकास” गर्न खोज्दैछन् ?
No comments	असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा यतिबेला गुल्मी सहित देशका बिभिन्न भागहरुमा हतार हतारमा बिकासका निर्माण काम सन्चालन भएका छन् । जिल्लामा अधिकांस स्थानमा योजना सम्झौता भएको लामो समयसम्म काम सुरु नगर्ने र असार महिना लागे पछि हतारमा काम शुरु गर्ने गरेको पाईएको छ । आज राजनीतिक दलका नेताहररु र सरोकारवालाहरु खुसुक्क तम्घास स्थित निलगिरी पार्टी प्यालेसमा गोप्य बैठक गरे । खासमा हिउँदमा के हेरेर बसेका थिए सरोकारवालाहरु, यो बर्खामा हतार हतार “बिकास” गर्न खोज्दैछन् ? यस बिषयमा सहकर्मी प्रेम सुनारले एनेकपा माओबादीका सचिवालय सदस्य भुपाल पोख्रेल, नेकपा एमालेका जिल्ला सचिब सोमनाथ सापकोटा र नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिब खिलध्वज पन्थी, स्थानिय बिकास अधिकारी डिलाराम पन्थी र बिश्लेषक हिरा एसीसँग गर्नुभएको बिशेष कुराकानी गर्नुभएको छ, सुनौँ: